トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Mail avy amin'ny efi-trano pachinko ilaina eo amin'ny latabatra hisafidy
In pachinko parlors, dia efa nandefa e-mail raharaham-barotra ny andro toy ny asa fandidiana. E-mail no tena ampahany, ny maraina sy ny sakafo atoandro miharihary eo anatrehanao, ary efa lasa maro pachinko efi-trano mba handefa ny hariva sy ny alina in-efatra. Nandritra ny hetsika lehibe, dia mety hitombo bebe kokoa. Ao amin'ny taratasy na inona na inona natolotr'i mailaka toy izany andro izany, niteny tamin'ny namany Sary ilaina tsara, dia ny alina talohan'ny namany Sary fanakatonana ny aharihary eo maraina namany Sary.
Voalohany, ny maraina namany Sary, fa tiako foana mijery ny mafy indrindra-mail. Event modely sy ny hetsika natao ny fotoana, na ny andro, dia fomba fanokafana ny Xintai, satria mitoetra eo indrindra namany Sary maraina, tsara kokoa foana ianao mijery mafy.
Ankoatra izany, ny modely izay manintona ny lokony sy ny endri-tsoratra feno fahasahiana, tsy isalasalana fa mihevitra fa ny modely efa nanisy hery tamin'izany andro izany. Fa tiako ny manamarika fa, tamin'ilay raharaha andro maromaro no modely hetsika toy izany koa, ao amin'ny tompon-ny hetsika modely, misy no toetry ny fanarenana milina.
ao amin'ny maraina isan'andro namany Sary, ianao koa dia afaka mahita amin'ny alalan'ny hetsika toy izany Gase modely. Ary, izay mora handray soa faran'izay betsaka amin'ny taratasy, dia fivarotana ny antony manosika. Amin'ny ara-dal?na raharaham-barotra, na manana ny mahazatra ravaka manodidina ny modely anarany, eo amin'ny tranga izay ny loko ny fototra amin'ny fotoana ny zava-nitranga, na efa niova ho mena sy mainty, fa ny olana ao mafy ao ny zava-nitranga ny andro, dia misy toe-javatra maro ny antso I.
maraina namany Sary toy ny pachinko efi-trano, satria ny raharaham-barotra dia midika hoe hisarihana mpanjifa, ny ampahany izay nampakatra ny raharaha noho ny hafa anjara, tsy maintsy hiavaka. Ankoatra izany, dia jereo Mariho koa ny teny.
, ohatra, ny raharaha mikendry ny baolina avy ao amin'ny faritra tsara indrindra, raha azonao atao misy azo fahatokiana, antso tafahoatra, toy ny an'i mafy payout sy ny fipoahana payout, sns, be ny fotoana avy ianareo hoe, satria maro ireo toe-javatra ny zava-nitranga nihazakazaka natao, dia ny saina avy amin'ny fampiasana ny teny no ilaina.
Next, tiako ianao hiala ny fandraisana ho mpikambana dia ny alina mailaka namany Sary nanolotra in mikatona talohan'ny. Ny
alina namany Sary , Koa satria efa voatanisa ny fiposahan'ny masoandro baolina filaharana ary nony ampitso dia ny hetsika vaovao, dia ilaina ny mieritreritra momba ny ady lafiny iray koa amin'ny andro manaraka. Na izany aza payout fandaharana, payout satria mety ho nandefa Te miampy kely, Heveriko fa tsara ny hisambotra ny lamin 'ny tsy mino boky iray manontolo.
, na izany aza, fa ny ho avy mametraka ny modely anarana no modely tena anarany avy, dia satria saika, mety voninahitra ny hevitra. Ankoatra izany, tsy ara-dal?na ny mahazatra namany Sary hafa noho ny mandeha, satria misy ihany koa ny tranga izay misy ny vaovao manokana, mas?na ianao, aza hadinoina ny mijery.
indrindra fa toy izany, ho avy ny vaovao manokana dia naniraka, dia toa hariva teo aloha fa maro ny avy any amin'ny tolakandro. Amin'ny hariva, satria tonga ny fotoana fa ny fandidiana miakatra, dia alefaso ho azy, hitily izany, ireo izay nahatsikaritra tany am-boalohany dia azo.
izany Mivoaka ny toetry ny pachinko efi-trano ao an-taratasy, mamaky ny fivarotana ny fahazarana, inona no hanampy na ny vaovao to, ary miezaka ny handinika anao alefaso lasa dikany izany.